Dorkasy Zoara Fanantenana - ZOARA FANANTENANA
Dorkasy Zoara Fanantenana
19. mars, 2013Non classé Commentaires fermés sur Dorkasy Zoara Fanantenana
Nanamarika ny 8 martsa, andro eran-tany ho an’ny vehivavy ny Dorkasy Zoara Fanantenana FJKM Ambohipo. Hetsika niarahana tamin’ny Dorkasy Foibe tetsy amin’ny FJKM Andrainarivo, ka saika nahatonga solontena tamin’izany avokoa ny sampana Dorkasy avy amin’ny FJKM eto andrenivohitra sy ny manodidina.
Nibahan-toerana tamin’io andro io ny fanehoana ny zon’ny vehivavy. Natomboka tamin’ny fiderana an’Andriamanitra ny fotoana narahan’ny fitsidihana trano heva izay nanehoana ny vokatry ny tany, ny asa tanana samihafa, ny kojakoja fampiasan’ny vehivavy, ny fikolokoloana ny volo sy ny tarehy, ny voninkazo, ny sakafo sy ny maro hafa.
Marihina fa fahaizamanaon’ny Dorkasy avy amin’ny fitandremana samihafa avokoa ireo naseho ireo. Nisy ihany koa ny fifaninanana soratra masina.
Niara-nisalahy tamin’ny Dorkasy FJKM Ambohipo tamin’io fanamarihana ny andron’ny vehivavy io ny FJKM Ambohipo manontolo. Niantohan’ny FJKM Ambohipo mantsy ny fanamafisam-peo tamin’izany. Noraisiny an-tanana ihany koa ny fakana horonan-tsary ny hetsika rehetra sy ny fandrindrana izany mbamin’ny fanatontosana “montage”. Nandray anjara tamin’ny filatroana fampisehoana lamaody koa ny sampana STK eo anivon’ny Zoara Fanantenana Ambohipo raha nampianatra ny fanamboarana mofomamy “cake” kosa ny VFL. Ny Dorkasy FJKM Ambohipo kosa nampianatra ny fandrahoana Pizza sy fanaovana mofo akondro.
Ny masoandro maty no nampalahelo satria voatery nahemotra amin’ny 14 avrily izao ny fifaninanan-kira saika hatao tamin’io 8 martsa io.